Israel waxay ka mamnuuceysaa Muwaadiniinta aan la talaalin dhamaan Goobaha Dadweynaha oo ay ku jiraan Sinagogyada
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Israa’iil Wararka Jebinaya » Israel waxay ka mamnuuceysaa Muwaadiniinta aan la talaalin dhamaan Goobaha Dadweynaha oo ay ku jiraan Sinagogyada
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Israa’iil Wararka Jebinaya • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Raiisel wasaaraha Israel Naftali Bennett
Kuwa diida inay talaalaan "waxay wiiqayaan dadaalka dhamaanteen," ayuu ku dhawaaqay Ra'iisul Wasaaraha Israel Bennett.
Tirada kiisaska cusub ee coronavirus ee Israel ayaa sii kordheysa.
Reer banii Israa’iil oo aan la talaalin looma ogolaan doono goob kasta oo ay la joogaan dad kor u dhaafaya 100 qof, gudaha iyo dibadaba.
Saynisku wuu cad yahay: talaaladu way shaqeeyaan, way waxtar leeyihiin, wayna nabad qabaan.
Raiisel wasaaraha cusub ee Israil Naftali Bennett ayaa maanta ku dhawaaqay in dhamaan dadka aan la talaalin ee degan Israa'iil goor dhow ayaa laga mamnuuci doonaa wax kasta oo ka mid ah gudaha ama bannaanka goobaha caamka ah ee lagu hayo 100 qof ama ka badan. Mamnuucidan ayaa sidoo kale ku jiri doonta sunagogyada.
Dadka diidaya tallaalka COVID-19 waxay "wiiqeyaan dadaalkeena dhammaanteen," Bennett ayaa yiri maanta, maaddaama tirada kiisaska cusub ee coronavirus ee dalka ay sii kordhayaan.
Haddii qof walba qaato tallaalka, noloshu caadi ayey ku soo noqon kartaa, laakiin haddii hal milyan oo qof ay diidaan sideedda milyan ee kale waa inay u adkeystaan ​​qufulka, ayuu ra'iisul wasaaruhu hadalkiisa ku daray
"Waxaa jira waqti ay tahay in wadahadalkan la joojiyo," Bennett ayaa u sheegay qaranka. "Sayniska wuu cad yahay: talaaladu way shaqeeyaan, way waxtar leeyihiin, wayna nabad qabaan."
Laga bilaabo Ogosto 8, Bennett wuxuu ku dhawaaqay, qof kasta oo diida inuu is tallaalo mar dambe looma oggolaan doono goob kasta oo ka sarreysa 100 qof, gudaha iyo dibaddaba - oo ay ku jiraan tiyaatarada, dhacdooyinka cayaaraha, iyo guryaha cibaadada. Si loo galo, dadku waa inay muujiyaan caddeynta tallaalka, caddeyn ay heleen COVID-19 oo ay ka bogsadeen, ama baaritaan diidmo ah, oo laga helay kharashkooda.
Israel waxay isticmaaleysay talaalka coronavirus Pfizer-BioNTech mRNA. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Caafimaadka, waxtarka tallaalka ee ka hortagga jirrada astaamaha ayaa istaagay 64% iyo ka hortagga cudur halis ah 93%.
Marwo Jane Godfrey wuxuu leeyahay,
Ogosto 16, 2021 markay tahay 02:22
Tani waa mid aad u khaldan oo khaldan inta sayniska la aado runtii aad bay u xun tahay oo aad bay u dhaawacaysaa dalkeenna hooyo. Haddii Madaxweynaha cusub ee Israa’iil uu si dhab ah u baranayey sayniska ka dambeeya tallaaladan covid -ka ah, wuxuu xaqiiqdii ogaan lahaa in sababta kiisaska covid -ka ay ugu soo kordheen gudaha Israa’iil lafteeda ay sabab u tahay tallaaladan covid -ka ah laftooda ee aysan ahayn kuwa diiday in la isku duro naftooda iyo daroogada tijaabada ah ee xitaa ku guuldaraysatay waa dariiqyadeeda badbaadada, maadaama dhammaan xayawaankii loo adeegsan jiray raadadka tallaalladan ay dhinteen, Dhammaantood.